Labo ruux oo ku geeriyootay Shil ka dhacay Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Labo ruux ayaa ku geeriyootay Shil gaari oo ka dhacay Magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada 21-ka October ee Degmada Waaberi sida dadka deegaanka ay inoo xaqiijiyeen.
Shilkaan ayaa yimid, kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka qaada iyo gaari noociisa uu yahay NOHA, markii gaariga yar oo si xowli ah u socday uu ku dhacay gaariga kale.
Dadka dhintay ayaa waxa ay saarnaayeen gaariga yar ee NOHADA ah, waxaana sidoo kale dhaawacmay ruux kale oo ka mid ahaa dadkii saarnaa gaariga.
Dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay u gurmadeen ruuxa dhaawaca ah oo loo qaaday goobaha caafimaadka Magaalada Muqdisho si daryeel logu fidiyo.
Ciidamada ilaalada wadooyinka ee loo yaqaan Taraafikada ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen si loo ogaado labada gaari midka qaldan ee sababta u ahaa shilkaan.
Shilalka noocaan oo kale ah ayaa ka dhaca Magaalada Muqdisho, xilliyada gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ay ka soo baxaan Dakadda Magaalada Muqdisho.
C/wali Gaas oo ka hadlay isku shaandheynta uu ku sameynayo Golaha Wasiirada